Warar iskhilaafsan oo ka soo baxaya qaabkii uu u dhacay dilka Osama Bin Ladin (Sawiro) – SBC
Warar iskhilaafsan oo ka soo baxaya qaabkii uu u dhacay dilka Osama Bin Ladin (Sawiro)
Warar iskhilaafsan oo ka soo baxaya qaabkii uu u dhacay dilka Osama Bin Ladin Jahwareer & warar is burinaya oo si weyn isku khilaafsan ayaa ka soo baxaya qaabkii uu u dhacay dilkii Hogaamiyaha shabakada Al-Qaacida Osama Bin Ladin oo Mareykanku ay sheegeen inu ku dileen weerar ka dhacay wadanka Pakistaan gaar ahaan magaalada Abbottobad.
Telefishinka Al-Carabiya ee fadhigiisu yahay magaalada Dubai ayaa maanta baahiyey warbixin uu ku sheegay in uu ka soo xigtey masuul sare oo ka tirsan sirdoonka Pakistaan oo sheegay in ay wareysteen gabar uu dhalay Osama Bin Ladin oo 12 sano jir ah taasi oo sheegtey in ay indhaheeda ku arkeysay markii ay ciidamada Mareykanku dilayeen Osama Bin Ladin.
Gabadhan & xubno kale oo ka mid ah qoyska Bin Ladin ayaa warar dhanka sirdoonka waxay sheegayaan in ay hayaan ciidamada Pakistaan iyadoo mid ka mid ah xaasaska Osama Bin Ladin oo dhaawac ah lagu daaweyeeyey Isbitaalka magaalada Rawalpindi ee wadanka Pakistaan wax yar ka dib markii uu dhacay weerarku.
Gabadha Osama dhaley waxay tiri “Aabahey isagoo nool ayay qabteen gaalada (ciidamada Mareykanka) ka dibna way dileen, ka dibna meydkiisa ayay ku qaateen diyaarad Helicpoter ah”. Tani waxay xoojinaysaa warar iskhilaafsan oo ka soo baxa aqalka cad ee Mareykanka, Waaxda Gaashandhiga Mareykanka & CIA-da Mareykanka kuwaasi oo ku aadan qaabkii uu dhacay dilka Bin ladin. In kastoo madaxweyne Obama uu sheegay in Osama la dilay isagoo hubaysan oo waliba la dagaalamaya ciidamada Mareykanka ayaa hadana waxaa taasi beeniyey saraakiil ka tirsan Aqalka cad gaar ahaan u qaybsanaha warfaafinta Jay Carney oo sheegay in Osama aanu hubaysneyn markii la dilayey.
Sidoo kale Madaxweyne Obama hadalkii uu sheegay ee ahaa in Osama xaaskiisa uu u adeegsadey in uu ka dhigto gabaad ayaa hadana warkaasi waxaa beeniyey Aqalka cad oo sheegay in Bin Ladin xaaskiisa Amal Al-Sadah oo 27 sano jir ah aheydna marwadiisa ugu yar xaasaskiisa lugta xabad lagaga dhuftey, iyadoo ruuxa haweenayda ah ee halgalkaasi ku dhintey lagu sheegay inay aheyd xaaskii Sheikh Abu Ahmed, oo ahaa fariin qaadaha Osama Bin Ladin.
Warka uu baahiyey Telefishinka Al-Carabiya wuxuu kaloo xusey in dadkii ka badbaadey ee qoyska Bin Ladin oo ay ku jiraan lix caruur ah iyo mid ka mid xaasaskiisa loo qaadey Isbitaalka Rawalpindi. Miss Al-Sadah markii uu guursanayey Osama Bin ladin waxay aheyd 17 sano jir waxaana ay ku dhalatey wadanka Yemen, iyadoo arooskoodu uu ka dhacay wadanka Afgaanistaan, waxaa la sheegay in Aabaheed uu siiyey Osama. Aabaheed markii uu ku darey Osama wuxuu sheegay in uu aad ugu hanweyn yahay gabadhiisa in uu ku daro Osama isagoo intaasi ku darey in uu aad ugu faanayo, gabadhan Osama wuxuu u soo celiyey Yemen isagoo iga dan lahaa amaankeeda, laakiin waxaa la sheegay in dib ay ugu laabatey Afgaansitaan, iyadoo ay jiraan warar sheegayey in dusha lagala socdey.
Amal Al-Sadah sirdoonka Pakistan waxay u sheegtey in ay ku noolaayeen guriga lagu weeraray Osama ilaa iyo sanadkii 2005-tii sida uu qorey wargeyska Time ee ka soo baxa Mareykanka. Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Pakistaan ayaa beeniyeya isaguna wararka ka imaanaya Mareykanka ee ah in guriga ay ka soo dhaceen rasaas waxaana uu yiri “Ma jirto xabadba ha ahaatee wax rasaas oo guriga ka soo dhacay, diyaaradoodu helicopterta ah waxay u soo dhacdey cilad farsamo wayna burburtey waxaana isla goobtii looga tagey burburkii diyaarada”. Dhinaca kalena warar laga helay Pentegon-ka Mareykanka ayaa xaqiijinaya in ciidamada Mareykanka ee Navy Seals ay faraha ka qaadeen inay wataan qoyska Bin Ladin ka dib markii ay soo dhacdey mid ka mid ah diyaaridihii ay wateen, waxaana lagu sheegay warbixinta in diyaaradu ay waxyeelo ka soo gaartey marawaxadaha taasi oo keentey in duuliyaha ay qasab ku noqotey in uu dhulka ku dajiyo helicoptarta. Madaxa hawlgalka la dagaalanka argagixisada John Brennan wuxuu yiri “Guriga waxaa joogay qoysk, waxaa jirtey qof dumar ah oo soo dhexgashay rasaastii la is waydaarsaneyey, taasi oo u muuqanaysa inay gabaad u noqon kartey Bin Ladin.
Laakiin aqalka cad wuxuu sheegay in Osama Bin Ladin aanu hubaysneyn markii ay ciidamada Mareykanka unuga US Navy Seal ay heleen iyagoo isla goobtii ku dila. Xoghayaha warfaafinta Jay Carney wuxuu sheegay in Bin Laden aanu hub wadan balse wuxuu qirey in ciidaamdu ay u dileen ka dib markii ay la kulmeen iska caabin aanu sheegin meesha ay ka timid. Hadalan iska horimaanaya ee ka imaanaya madaxda Mareykanka ayaa shaki ku gadaamaya xaqiijinta dilka Osama Bin Ladin, waxaa kaloo la yaab leh in dad badan ay ku wareersan yihiin halkii ay u raaci laheeyn xaqiijinta warkan.
Dad badan oo dunida dacaladeeda ku dhaqan ayaa waxay muujinayaan shakiga ah in Osama Bin Ladin uu goor hore dhintey oo Mareykanuna ogaayeen isla markaana ay doonayeen sii socoshada dagaalka loogu yeero la dagaalanka argagixisada laakiin xiligan oo ay muuqato in dhaqaale xoogan uu kaga baxay ay keentey in la sheego dhimashada Bin Ladin oo ahaa mashruuc uu Mareykanku watey.
Dad kale ayaaba aaminsan in hadiiba uu jiro weerarka Mareykanku uu sheegay in Bin ladin uu ku diley ay tahay inay heleen isagoo xanuunsan maadama mar hore ay soo baxeen warar is soo taraya oo sheegaya in Bin Ladin uu la ildaran yahay xanuun xaga kelyaha, iyadoo shakiga caafimaadkiisa ay muujinayso sida fudud loo helay ama loo diley, iyadoo la ogyahay awooda ay leeyihiin Al-Qaacida. Dooda arinkan ku aadan waxay leedahay caafimaadka Bin Ladin wuxuu keenay in uu iskaba ahaa ruux dhul yaal ah oo aan waxba u galin Al-Qaacida, amaba uu qabey dhaawac daran oo ka soo gaarey weeraradii lagu beegsanayey in lagu dilo. Si kastaba ha ahaateen aqalka Cad ayaa laga sugayaa in ka jawaabo waydiimaha iyo shakiga faraha badan ee ku gadaamaan dhimashada Bin Ladin iyo waliba in uu meesha ka saaro wararka is burinaya ee ka soo baxaya saraakiisha Mareykanka oo uu ku jiro Madaxweyne Obama.